Ihe omuma na-ekpughe Olee otú CTR si kọọrọ gị Web Page ogo
Onye ọ bụla nke na-achọ inwe ihe ịga nke ọma n'ahịa ahịa n'ịntanetị pụrụ iche echiche mmetụta nke organicọnụọgụ site-ọnụ (CTR). Dịka ndị ahịa na ndị mmadụ n'otu n'otu na-eme nyocha na-emekarị, gbalịa ịpụ ndị asọmpi gị site n'ịgbasoSEO usoro. Otú ọ dị, ihe nchọpụta Google na asọmpi egwu na-amabeghị ya ozugbo ha adịghị ekpughe ihe njiri nke algọridim han'ihu ọha - nexen cottonwood. Ma ihe anyị maara bụ na CTR na-emetụta ogo dị ka ihe na-enweghị isi.
Otú ọ dị, ọnọdụ dị n'ahịa ahịa na-eweta foto dị iche. Dị ka ọmụmaatụ, njikwa CTRIhe nhazi Google. Ọtụtụ ndị ahịa ntanetị na-agbalị ịme ihe kachasị mma. N'isiokwu a, Jason Adler, Onye Nlekọta Ndị AhịaOnye njikwa nke Ọkachamara kpughere iche iche n'etiti CTR na ogo, na-akọwa otú ha si adabere. E nwekwara atụmatụ ndị dị mkpa ga-enyere gị akaGoogle click-through rate (CTR) na-arụ nke ọma na SERPs.
Olee otú CTR si emetụta ogo
Iji weputa weebụsaịtị n'ụzọ dị irè, e kwesịrị inwe njirisi maka ịtụkwasị weebụsaịtị naiwu. N'ihi ya, Google na-eji ozi dịka pịa data. CTR emetụta ọnụego ọnụego nke nsonaazụ SERP. N'ihi ya, ebe nrụọrụ weebụ kachasịA na-etinye ọnụ ọgụgụ clicks na n'elu, ebe ndị na-ejiri bọtịnụ ole na ole na-etinye na ala. A na-edozi algorithm iji tụlee ọdịnayanwere nnukwu ọnụọgụ dị mkpa..Imirikiti search engines na-etinye ntụziaka a n'ọchụchọ ha algọridim. Google na-adụ ndị na-ede blọgụ ọdụiji bụrụ isi na mkpa ọdịnaya. Ka ọdịnaya na-agbanwe agbanwe, clicks ime. Mpempe akwụkwọ ndị a na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ nweta ụgwọ ọrụ nke magburu onwe yanyochaa nke a na-eme ka nsonaazụ SEO gị.
Nke abuo, Google dabere na CTR dị ka njirimara nke igosipụta OneBox. Awebsite ga-enwe CMT kacha nta iji nweta OneBox na ebe nrụọrụ weebụ ha. Google nwere usoro nyocha nke na-enyocha ọnụọgụ-site ọnụego(CTR) site na OneBox ngosi ọ bụla ajụjụ. Nke a nwere ike ịkọwa ụfọdụ mgbanwe nke oge n'oge ogo nke otumkpokọta ma ọ bụ ibe. Dịka ọmụmaatụ, otu ibe weebụ nwere ike ịme nke ọma taa ma ọ bụghị nke ọma n'echi. N'ihi ya, ndị ahịa ahịa dijitalụkwesịrị iji ọrụ dị mkpa dị ka isi ihe. Ịnọgide na-enwe CTR gị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ n'ụzọ dị mma na engines ọchụchọ.
Ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị inwe ezigbo bọtịnụ site na ọnụego. Site na aka aka dị oké egwumaka ozi nke choro ogo. Ọ dị mkpa iji hụ na ndị mmadụ na-ejikọ njikọ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-etinye aka na ya makaoge dị mkpa. CTR na-eme ka ikike gị nwekwuo ikike site na mkpa, nke na-eme ka ogo gị dịkwuo mma. Maka CTR ka ọ baara gị urusite na SEO, otu ga-ahazi ọdịnaya nke weebụsaịtị na nchịkọta na mkpado meta. Google gosipụtara ebe nrụọrụ weebụ si dị mkpa nke gịọdịnaya. Nnukwu ọdịnaya nwere ọnụ ọgụgụ dị elu site na ọnụego. Google algorithm na-ejikwa atụmatụ a mee ihe dị iche iche na ọnọdụ dị iche ichesaịtị kwesịrị.
Ndị na-ere ahịa n'Ịntanet nwere ike ịrụ ụka banyere ma Google CTR nwere mmetụta nansonaazụ ọchụchọ ma ọ bụ. Eziokwu bụ na CTR, n'eziokwu, na-enyere ebe nrụọrụ weebụ aka ịhọrọ elu. Otú ọ dị, o nwere ike isiri nghọta ịghọta mmekọrịta ahụn'etiti CTR na SEO. Anyị nwere olileanya na isiokwu a enyerela gị aka ịghọta mmekọrịta dị n'etiti nrụgide abụọ a na ụzọị nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ gọọmenti Google gị (CTR) rụọ ọrụ nke ọma na SERPs.